September 30, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 0
MUQDISHO(P-TIMES) – 5kamid ah kuraasta Aqalka sare ee kasoo jeeda Somaliland ayaa maanta lagu dooranayaa magaalada Muqdisho ee caasumada Soomaaliya, waxaana sheekada xiisaha leh ay tahay in kuraastii sida weyn loogu loolamayay lagu kala baxay maalintii shalay ahayd.
Kuraasta maanta ayaa sida muuqata ka tartan yar kuwii shalay, iyadoo ay inta badan iska cad yihiin Kuraasta soo bixi karta, taas oo ka dhigan in tartan adag uusan jiri doonin.
Sida ay cadeynayaan xogaha la helayo, qaarkood ayaa lagu bixiyay xalay dhaqaale, aad uga yar kuraastii shalay ee ay ku loolameen dhinacyada siyaasada Soomaaliya.
Xubnaha la filayo in ay maanta soo baxaan ayaa kala.
1- Axmed Ibrahim Maxamed (Qorane), waa Ciida-Gale, waxaa la tartamaya Baashe Maxamed Ismaaciil oo Abwaan Qorane malxiis ahaan u keensaday, tartan lagama filayo kursigaas.
2- Deeq Xasan Xuseen waa kursiga labaad ee beesha samaroon, waxay la tartamaysaa Hodan Abakor Xuseen oo ay jifi hoose isku yihiin Senator Samatar oo shalay la doortay sidaas daraadeed kursigana tartan kama furna.
3- Siciid Said Xuseen, wuxuu kasoo jeeda beesha habar-jeclo, waa senatorkii afartii sanno ee lasoo dhaafay kursigan ku fadhiyey, waxaa lagu tiriyaa Saaxiibada dhaw dhaw ee Villa Somalia, waxaa la tartamaya Jaamac Cabdillahi Maxamed, waxaana la filayaa in Siciid kusoo laabto kursigan.
4- Axmed Maxamed Siciid wuxuu kasoo jeeda beesha Habar-joonis, in uusan tartan mari doonin ayay u badan tahay.
5- Muna Cumar Axmed, waa beesha habar-awal, waa senatoradii kursigan ku fadhiday afartii sanno ee lasoo dhaafay, waxaa kula tartamaya Niciimo Xaaji Gadhweyne oo aabaheed 20 sanno soo ahaa Wasiir waxbarasho oo aan dhicin Somaliland iyo Sucaad Xasan Maxamed oo aan xog badan laga hayn. Muna ayaa tartan adag la filayaa inay la gasho Niciimo Gadhweyne.